630mm PVC Sodina Extrusion Line any Egypt
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-05-16
Tamin'ny volana Mey, tonga tany amin'ny ony Neily tsara tarehy ireo injenieran'i Grace mba handotoana ary hampandeha ny tsipika famokarana fantsom-bokotra PVC 315-630mm roa. Ny tsipika famokarana dia misy extruder kambana fisintahana kambana miolakolaka, boaty tsy misy fangarony, boaty famaohana, traktera, milina fanapahana ary milina mirehitra; ny unit dia manana p ...
Indostrian'ny minisiteran'ny Irak
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 17-05-21
Tetikasa lehibe iray an'ny Ministeran'ny Indostria ao Iràka izany. Andriamatoa Manhal Aziz Al Khabaz, Minisitry ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Mineraly ao Iràka, ary Ahmed Hussain, talen'ny SCCI dia nanatrika ny lanonana misokatra ho an'ny Grace Pipe Equipment. Dr. Hussein Muhammad Ali, mpanolo-tsaina ny fampandrosoana ny Mi ...
Logo vaovao, Sary vaovao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 17-03-21
Ny GRACE dia mifototra amin'ny Jiangsu China, ary mitazona hatrany ny fivoaran'izao tontolo izao. Mifantoka amin'ny sehatry ny famokarana plastika sy fanodinana fitaovana, GRACE dia mpamatsy fitaovana fampidirana endrika, R&D, famokarana, varotra ary serivisy. GRACE NEW LOGO dia miaraka amina fampiroboroboana voninahitra, hanokatra ...
Ny fitaovana dia eken'i Total tanteraka
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 16-12-21
Vao tsy ela akory izay, ny mombamomba ny TPE Extruder natao ho an'ny TOTAL avy any Frantsa dia nahomby. Nandritra ny vanim-potoana fitsapana, ny mpiasa manamarina dia tena afa-po amin'ny kalitaon'ny fitaovana, mandritra izany fotoana izany, tena midera ny fiasa henjana sy matotra, ny fahombiazan'ny asa avo lenta, ny fahaizana teknika